ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဇီယာစေ့နှင့်အတူ marinated zucchini - တဆေးညွှန်း | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
zucchini မတူဘဲ, zucchini အသားအရေမဲမှောင်နဲ့သိပ်သည်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဇာတိပကတိ - ပိုပြီးအရည်ရွှမ်း။ ပိုပြီးကဲ့သို့ချဉ် zucchini - သူတို့ tverdenkimi နှင့် crispy ရရှိခဲ့ကြသည်။
ဘယ်လိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ marinated zucchini လှိမ့်ရန်, အိမ်ရှင်မပြောပြပါ။ သငျသညျ သာ. ကွီးမွတျတွေလိုပဲလိုလျှင်တစ်ဝက်ကြက်သွန်ဖြူနှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဘဏ်ထဲမှာထည့်ပြီးမှမိတ်ဘူး, ပူပြင်းတဲ့ငရုတ်ကောင်း။
1 ဌ (အချိန် 1,5 ဇ) နှုန်းတောင်းဆိုနေတဲ့:
ငယ်ရွယ် zucchini - 1 ကီလိုဂရမ်;
ကြက်သွန်ဖြူ - 20 ပါ g;
လတ်ဆတ်တဲ့ဇီယာစေ့ - 40 ပါ g;
ပူငရုတ်ကောင်း - ထိုခွံ၏ထက်ဝက်ပျမ်းမျှ;
ဖြည့်ဖို့ရေ - 1 ဌ;
ဆား - 65 က c;
ရှလကာရည် 9% - 1,5 အနုပညာ။ မုသာစကား
zucchini marinating ဘို့ညွှန်ကြားချက်များ
1 ။ လောကဓာတ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောငယ်ရွယ် zucchini အဘို့ကို Select လုပ်ပါ, သူတို့ကိုလျှော်စက်ဝိုင်းပေါ်မှာဓါးနှင့်အတူခုတ်။ အထူအတွက် 2-3 စင်တီမီတာများအတွက်စံပြ။
2 ။ တစ်ပိုးအိုးတလုံး၏အောက်ခြေပေါ်မှာနေရာချစကာဇီယာစေ့, ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့နှင့်ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်း၏အကိုင်းအခက်။ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပိုးမွှားသတ်ပါလိမ့်မယ် - သငျ (အမျိုးတွင်မှာဘဏ်ကိုစွဲစေရန်) ရေနွေးငွေ့ကိုကျော်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်မီးဖို၌, မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို။
3 ။ နံ့သာမျိုးနှင့်အစိမ်း zucchini စက်ဝိုင်းထိပ်ပေါ်တွင်လဲလျောင်း - တင်းကျပ်စွာ Compact ။
4 ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း, အ marinade ပြင်ဆင်: ဒယ်အိုးထဲမှာရေတစ်လီတာကိုပြုတ်, ဆားကိုငါသွန်းပါကပျော်ပါ။ ထို့နောက် allspice ထည့်ပါ, ရှလကာရည် အရည်ချက်ချင်း zucchini တစ်အိုးထဲသို့သွန်းလောင်း။
5 ။ သတ္တုအဖုံးစွဲစေ, လိပ်စက်, (ထိုဖျာပေါ်တွင်) ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအိုးတလုံးထားတက် bottomed ။ တစ်စောင်နှင့်အတူအဖုံးဖုံးနဲ့ချအေးတိုင်အောင်မထိကြဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဇီယာစေ့နှင့်အတူ marinated zucchini,3လအတွင်းကနေတဆင့်မြေအောက်ခန်းထဲမှာ store ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
Zucchini ချီလီ - အံ့သြဖွယ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားရစရာ!
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,275 စက္ကန့်ကျော် Generate ။